စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၏ ISO 9001: 2015 QMS လက်မှတ်ရ ဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအား ပထမအကြိမ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း
စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ သုတေသနဌာနစုအသီးသီး၏ ဓာတ်ခွဲခန်း (၇) ခုနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနစုတို့သည် UK’s National Accreditation Body မှ ပေးအပ်သော ISO 9001: 2015 Quality Management System (QMS) လက်မှတ် ရရှိပြီးဖြစ်ရာ၊ အဆိုပါ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုများအား ပထမအကြိမ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းအခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ (၂၃) ရက်နေ့၊ နံနက် (၉) နာရီအချိန်က စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ နဝရတ်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ညွှန်ကြားရေးမှ...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုတေသနဌာန IRRI နှင့် တာဝန်ရှိသူများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုတေသနဌာန (IRRI) မှ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် Dr. Robert Caudwell နှင့် စိုက်ပျိုး ရေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာနိုင်ကြည်ဝင်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသန့်လွင်ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်မွှေးမွှေးနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ (၁၉)ရက်နေ့၊ နေ့လည် (၁၁) နာရီအချိန်က စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ နဝရတ်ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မိုးရာသီ၌ ဆောင်ရွက်မည့် သုတေသန စမ်းသပ်ကွက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးန...
စျေးကွက်အလားအလာကောင်းသည့် နှမ်းနက်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များပွားများထုတ်လုပ်နိုင်ရန် သုတေသနပြုခြင်း
နှမ်းသီးနှံတွင် ဘီတာမင် အေ၊ ဘီတာမင် ဘီ၊ ဘီတာမင် စီ၊ ဘီတာမင် ဒီ၊ ပရိုတင်းဓါတ်၊ ပိုတက်စီယမ်နှင့် အမျှင်ဓါတ်များ ပါဝင်ခြင်း၊ မပြည့်ဝဆီ (မိုနို မပြည့်ဝဆီနှင့် ပိုလီ မပြည့်ဝဆီ) များပါဝင်ခြင်းနှင့် ကိုလက်စထရောလုံးဝ မပါဝင်ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သည့် စားသုံးဆီသီးနှံဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် နှမ်းနက်တွင် ဆေးဖက်ဝင် အာနိသင်များ (ဥပမာ- ကိုယ်ခံအားကောင်းခြင်း၊ သွေးဖိအားထိန်းညှိပေးခြင်း၊ အစာခြေအားကောင်းခြင်း) ပါဝင်ခြင်းကြောင့် စားသုံးသူကြိုက်နှစ်သက်သည့် အရသာ၊ အရည်အသွေးကောင်းများပါဝင်သည့် ဈေးကွက်အလားအလာက...
ခေတ်မီနည်းပညာများအသုံးပြု၍ အဆင့်မြင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် Temperature Controlled and Illuminate High Tech Greenhouse ဆောက်လုပ်ပြီးစီး၍ ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးချနိုင်ရေးလက်တွေ့ပြသခြင်း
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ ပဲမျိုးစုံသီးနှံသုတေသနဌာနစု၏ ကွင်းသုတေသနစိုက်ခင်း၌ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပဲတီစိမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကွန်ရက် တည်ထောင်ခြင်းစီမံကိန်း အစီအစဉ်အရ သြစတြေးလျနိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဌာန (ACIAR) ၏ ရန်ပုံငွေ အထောက်အပံ့ဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Bhahu Biotech Private Limited မှ တာဝန်ယူကာ Temperature Controlled and Illuminate High Tech Greenhouse ကို အောင်မြင်စွာ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်ရာ၊ အဆင့်မြင့်သုတေနလုပ်ငန်း...
ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု စံပြကျေးရွာသစ် ထူထောင်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း
ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု စံပြကျေးရွာသစ် ထူထောင်ရေးအတွက် ကိုရီးယားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စိုက်ပျိုးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ (KOPIA) နှင့် စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DAR) တို့ သုတေသန အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ (၆) ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၂) နာရီအချိန်က ရေဆင်း- စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ နဝရတ်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အခမ်းအနားသို့ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာနိုင်ကြည်ဝင်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြား...
"ပိုမိုကောင်းမွန်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး စိုက်ပျိုးရေးစနစ်" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် စိုက်ပျိုးရေးသုတေသန စာတမ်း ဖတ်ပွဲကျင်းပ
စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအပြင် တဖက်မှလည်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့် ရေ၊ မြေ၊ ရာသီဥတု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိပြီး ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မည့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ရေး၊ သုတေသနရလဒ်များကို တောင်သူများ လက်တွေ့ အသုံးချနိုင်သည့် နည်းပညာအဖြစ်ပြောင်းလဲဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရေး လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်သူ အားလုံးတို့က ဝိုင်းဝန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ပေးကြစေလိုကြောင်း မတ်လ (၅) ရက်နေ့၊ နံနက် ၉ နာရီ အချိန်က...
ဗီဇအချက်အလက် နည်းပညာများကိုအသုံးပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆန်စပါး မျိုးမွေးမြူရွေးချယ်ရေးကဏ္ဍမြှင့်တင်ခြင်း စီမံကိန်း အစီအစဉ်အရ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီအစည်းအဝေး
စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DAR) နှင့် ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (JICA) တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဗီဇအချက်အလက်နည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆန်စပါး မျိုးမွေးမြူရွေးချယ်ရေးကဏ္ဍ မြှင့်တင်ခြင်း စီမံကိန်းအစီအစဉ်အရ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ (၄) ရက် နေ့၊ နံနက်(၈)နာရီတွင် စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ Farmer Channel အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးသို့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမ...
ဂျပန်နှင့် လာအိုမှ စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များအဖွဲ့ လေ့လာရေးလာရောက်ခြင်း
ဂျပန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (JICA) မှ Mr. Fujii Tomoyuki နှင့် လာအိုနိုင်ငံ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်တောဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Bouthsakone Inthalangsee ဦးဆောင်သော စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင် (၈) ဦး ပါဝင်သည့် လေ့လာရေးအဖွဲ့သည်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ (၃) ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၁) နာရီအချိန်က စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၏ သုတေသနစိုက်ခင်းများသို့ လေ့လာရေးခရီးလာရောက်ကြရာ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာနိုင်ကြည်ဝင်း၊ စပါးသီးနှံသုတေသနဌာနစုတာဝန်ခံနှင့်...
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၌ "Smart Green Agricultural Farming Systems" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဒုတိယအကြိမ် သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲ အခမ်းအနားသိ...
📅 ကျင်းပမည့် နေ့ရက် - ၅. ၃. ၂၀၂၀ (ကြာသပတေးနေ့) နှင့် ၆. ၃. ၂၀၂၀ (သောကြာနေ့)🕘 ကျင်းပမည့် အချိန် - နံနက် (၉) နာရီ🏡 ကျင်းပမည့် နေရာ - စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန (ရေဆင်း)၊ နဝရတ်ခန်းမနှင့် စုဝေးခန်းမ📍သုတေသန စာတမ်းခေါင်းစဉ်များ၊ စာတမ်းရှင်နှင့်အဖွဲ့၊ ဖတ်ကြားမည့် အချိန်နှင့် နေရာတို့အား သိရှိနိုင်ရန် အစီအစဉ်အသေးစိတ်ကို ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းနှင့်တကွ ဖော်ပြထားပါသည်။
အမျိုးသားအပင်မျိုးသစ် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း
အမျိုးသားအပင်မျိုးသစ် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးကို ဖေဖော်ဝါရီ (၂၆) ရက်နေ့ နေ့လယ် (၁)နာရီခွဲ က စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ အမျိုးသားအပင်မျိုးသစ် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ ဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးလှကျော် တက်ရောက်အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားသည်။အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသားအပင်မျိုးသစ် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး က ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒုတိယဝန်က...